संघीय गणतन्त्रलाई जोगाउन मैले पदलाई बलिदानी दिएँ : डा.भट्टराई - Marganugami Daily
Marganugami Daily Main News Samaj संघीय गणतन्त्रलाई जोगाउन मैले पदलाई बलिदानी दिएँ : डा.भट्टराई
संघीय गणतन्त्रलाई जोगाउन मैले पदलाई बलिदानी दिएँ : डा.भट्टराई
Domain Registration Nepal प्रकाशित समय 11:32:00 AM
( डा.बाबुराम भट्टराई, संयोजक( नयाँ शक्ति नेपाल )
मिठो नारासहित ल्याइएको शिशु लोकतन्त्रले विकृतिको आहालबाट गिज्याइरहेको जस्तो लाग्दैन ?
विलकुल लाग्दैन । किनकी लोकतान्त्रिक परिवर्तनको प्रक्रिया अलि लामै हुन्छ । अरु देशमा पनि दशकौं, पचासौं, सयौं वर्ष लागेका छन् । हामीकहाँ पनि करिब ७ सालको आसपासदेखि जब लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रिया नेपालमा सुरु भयो, त्यसलाई हामीले ०६२र६३को आन्दोलनसम्म आइपुग्दा एउटा उत्कर्षमा पुर्याऔं र संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म पुगेपछि त्यो ८० वर्षको लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रिया मुलतः पूरा भएको छ । यस अर्थमा हामीले यसलाई सकरात्मक ढंगले ग्रहण गर्नुपर्छ ।
तर तपाईंले दरबार हत्याकाण्डभन्दा अगाडि त माओवादी र राजावादीको बीचको सहकार्यमै जोड दिनुहुन्थ्यो, होइन र ?
होइन, हामीले कहिल्यै जोड दिएनौं । ट्याक्टीकल्ली संसदीय सुधारवादी शक्ति, राजतन्त्रात्मक सामन्तवादी शक्ति दुवैलाई पराजित गरेर त्यो भन्दा माथिल्लो राज्य व्यवस्था ल्याउनको लागि हामीले संघर्ष गरेका थियौं । एउटा चरोलाई शिकार गरेपछि दोस्रो चरोमाथि शिकार गरिन्छ । त्यसकारण हामीले पहिले संसदीय शक्तिमाथि प्रहार गर्यौं । तर जब राजतन्त्र अगाडि आयो, त्यसपछि राजतन्त्रमाथि प्रहार गर्यौं ।
भनेको त्यो एउटा जालझेल थियो ?
जालझेल थिएन । यो त एउटा रणनीति र कार्यनीतिको प्रश्न थियो ।
त्यसो भए, दरबार हत्याकाण्डबाट गणतन्त्रको जग बसेको भन्नुपर्छ ?
विलकुल । तपाईलाई याद होला, मैले २०५८ साल जेठ १९ गते दरबार हत्याकाण्ड भएपछि जेठ २४ गते कान्तिपुरमा मैले जुन लेख लेखेँ, त्यतिबेला नै नेपालमा गणतन्त्र आयो, अब यसलाई संस्थागत गर्नुपर्छ भन्ने बहस सुरु गरेको थिएँ ।
तपाईंले त दरबार हत्याकाण्डमा ‘रअ’को पनि हात छ भनेर लेख्नुभयो होइन ?
हामीलाई आकस्मिकरुपमा एउटा वंश सकिएर अर्को वंश मात्रै रहेपछि आशंका भएकै हो ।
‘रअ’को हात थियो भन्ने कुरा आशंका, सूचना हो कि विश्लेषण हो ?
होइन, हाम्रो विश्लेषण हो । रअ, सिआइएलगायतका जुन अन्तर्राष्ट्रिय खुफिया एजेन्सीहरु छन्, सायद यिनीहरुले पनि नेपालमा विरेन्द्रको वंश कमजोर सावित भयो, त्यसैले त्यो भन्दा क्रुर, फासिस्ट र माओवादीलाई दमन गर्न सक्ने शक्ति आवश्यक पर्दछ भनेर सायद यो वंशलाई ल्यायो कि भन्ने हाम्रो गम्भीर आशंका थियो, त्यसैको आधारमा हाम्रो विश्लेषण थियो ।
रअ वा बाह्य शक्तिको हात थियो भने त गणतन्त्रको कार्यान्वयन ०६४मा तपाईंहरुले गर्नुभयो जो कि गणतन्त्रको जग बाह्य शक्तिले ?
त्यो गलत हो । गणतन्त्रको माग त हाम्रो ०५२ सालमा थियो । तत्कालीन माओवादी आन्दोलनको दबावको कारणले नै पुरानो राज्यव्यवस्था थेग्न सकेन र त्यो अंश, अंश र टुक्रा टुक्रा हुँदै ढल्न थालेको थियो ।
राजनीतिक सत्ता र शक्ति बिना के त्यस्तो चिज हुँदो रहेछ जहाँ ठूला ठूला लक्ष्य लिएर हिँडेका मान्छेहरुलाई पनि आफ्नो विचारबाट, मूल्य र मान्यताबाट च्यूत गराइदिन्छ, त्यो प्रसंग मैले किन झिकेको भने तपाई र प्रचण्ड गान्धी र मण्डेला बन्न हिंड्नु भाथ्यो ।
होइन, हामी अहिले पनि त्यही बाटोमा छौं । गान्धी र मण्डेलाहरुले पनि राजनीतिक शक्तिको अभ्यासै नगर्ने कहिले पनि भनेनन् । खाली आफैंले व्यक्तिगतरुपमा नेतृत्व गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा बेग्लै कुरा हुन् ।
तपाईंले नयाँ पुस्ता युवा पुस्ताको हामी नेतृत्व गर्दछौं भन्नुभाछ ?
होइन, हामी पनि गर्दैछौं । दुईचोटि भन्दा बढी कार्यकारी पदमा बस्नुहुँदैन भन्ने विधानमै हामीले पारित गरेका छौं ।
अब तपाईं प्रधानमन्त्री बन्नु हुँदैन ?
बन्ने नबन्ने प्रश्न होइन, म त नयाँ युगको नेतृत्व गर्ने नयाँ शक्तिको निर्माण गर्दैछु ।
भनेपछि मनमा अलिकति प्रधानमन्त्री बन्ने लालसा त छ ?
होइन, लालसा होइन । जिम्मेवारीबोधको कुरा हो । व्यक्तिगत र निजी स्वार्थको निम्ति गर्नु लालसा हो । तर सामाजिक र देशको हितको निम्ति जिम्मेवारी वहन गर्नु भनेको लालसा होइन ।
अनि अहिले तपाईंका पूर्व सहकर्मी प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्ने अग्रसरता देखाइरहेका छन्, त्यो के हो ?
त्यसमा म टिप्पणी गर्न चाहन्नँ । राजनीतिमा लागेको मान्छेले सत्तामा पुगेको आ–आफ्नो सोचअनुसार भूमिका निर्वाह गर्छु भन्छ भने त्यसलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन । तर जुन एउटा भद्दा प्रकारको पुरानै संसदीय प्रणालीलाई टालटुल पारेर कायम राख्यौं, त्यसले गर्दा उही मान्छेहरु पटक पटक सत्तामा आउने । त्यसैको परिणाम अहिले सत्ता परिवर्तनको खेल भइराखेको छ ।
तर प्रचण्डलाई विगतमा सँगसँगै बसेर डुबाउनमा तपाईंको ठूलो हात छ भन्छन् ?
यो गलत कुरा हो । यो नेपालको नकरात्मक ढंगले सोच्ने जुन संस्कार र संस्कृति छ, अँध्यारो मात्रै देख्नेहरुको टिप्पणी हो, त्यसमा सत्यता छैन ।
सेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपतिले त्यो निर्णय उल्ट्याउँछन् भन्ने थुप्रै तहबाट सूचना पाएर आफू सुनिश्चित भएपछि पनि तपाईंले प्रचण्डलाई उकास्नुभयो भन्ने टिप्पणी हुनेगर्छ ?
यसमा कुनै पनि सत्यता छैन । यो तथ्य र सूचनाको आधारमा भन्दा हल्लाको आधारमा षड्यन्त्रको सिद्धान्त आविस्कार गर्नेहरुले भनाई हो । यो सतप्रतिशत झूठो कुरा हो ।
बाबुरामजीले बिहानै बेलुकै बस्न खान नदिएपछि म बहकिएँ भनेर ‘?
होइन, म अरुको बारेमा टिप्पणी गर्ने मेरो काम होइन । त्यो उहाँसँगै सोध्ने कुरा हो । रुक्मांगद कटवालले जुन प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र थियो, त्यसलाई स्वीकार गर्नु, सेनालाई एएटा नागरिक सर्वोच्चता अन्तर्गत ल्याउन जसरी इन्कार गरिराखेका थिए, त्यसको विरुद्धमा उनलाई सुरुमा नै कार्वाही गर्नुपर्थ्यो । खासगरी माओवादीले सेनापतिलाई हटाएर कू गर्दैछ र सत्ता लिँदैछ भन्नेखालको जुन हौवा सिर्जना गरियो, त्यसैको परिणामस्वरुप विभिन्न शक्तिहरु सायद त्यहाँ परिचालित भएका हुनसक्छन् । त्यो एउटा बितिसकेको अध्याय हो, त्यसलाई म पुनः कोट्याउन चाहन्नँ ।
त्यो निर्णय जुन उल्ट्याइदिए राष्ट्रपतिले, त्यही राष्ट्रपतिसँग तपाईं प्रधानमन्त्री हुने बेलामा पनि एकदम तनावपूर्ण स्थिति थियो रे ?
होइन, त्यस्तो कुरा होइन । बेलायतमा, फ्रान्समा, रुसमा, चीनमा जसरी लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रिया ठूलो क्रान्तिमार्फत सम्पन्न भएका थिए, नेपालमा हामीले एकै झड्कामा लोकतान्त्रिक रुपान्तरणलाई पूरा गर्न सकेनौं । यसलाई हलाल क्रान्ति भन्छु म । ००७ सालमा अलिकति, ०४६ सालमा अलिकति, २०६२÷६३ मा अलिकति, त्यसैको पीडा चाहिँ लम्बिएको मात्रै हो । त्यतिबेलाका सम्माननीय राष्ट्रपति पनि आन्दोलनबाटै आउनुभएको हो । तर उहाँलाई प्रयोग गर्ने प्रयत्न गरियो ।
कू गर्ने प्रयत्न पनि भए ?
होइन, त्यस्ता केही प्रयत्नहरु भएका हुन् ।
कतिपयले भन्ने गरेको नयाँ जनवाद स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएर हिँडेको बाबुराम भट्टराई कम्युनिष्टको जामा खोलेर हिँडे भनेको चाहिँ सत्य हो त ?
त्यो, गलत हो । यो धर्मशास्त्र र रुढीवादमा विश्वास गर्नेले भन्ने कुरा हो । यी शब्दहरु आफ्नो सन्दर्भ र समयमा प्रयोग हुन्छन् । माओले नयाँ जनवाद भन्नुभयो, रुसमा लेनिनले नयाँ जनवाद भन्नुभयो । हाम्रो सन्दर्भमा पनि हामीले नयाँ जनवाद भन्ने शब्द प्रयोग गरेको हो । तर हामीले अहिले फरक ढंगले सम्झौतामार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुर्यायौं । नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो सन्दर्भको जनवाद मुलतः यही नै हो । मुलरुपमा यही हो र यसैमा टेकेर लोकतन्त्रलाई समृद्ध बनाउन हामी अगाडि बढ्छौं ।
चुनवाङ बैठकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको बहुदलीय गणतन्त्र हो, प्रतिक्रियावादी वर्ग र तिनका पार्टीले चाहिँ यसलाई बुर्जुवा गणतन्त्रमा रुपान्तरण गर्न खोज्छन्, हामीले चाहिँ यसलाई नयाँ जनवादी गणतन्त्रमा लैजानुपर्छ भनेर प्रस्ताव नै पेश भएको थियो । तपाईले यसलाई अलपत्र छाड्नुभयो नि ?
त्यसलाई अलपत्र होइन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा टेकेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने मेरो दृढ मान्यता थियो । त्यतिबेला किरणजीहरु यसको पूरै विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो र प्रचण्डजी बीचमा ढुलमुल गर्नुहुन्थ्यो । त्यसैले त्यहाँ बीचको भाषा प्रयोग गरिएको हो । त्यसको सार चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउने हो । २०६१ साल पुषमा मैले कान्तिपुरमा मैले एउटा लेख लेखेको छु, पहिलो चोटि नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनुपर्छ भनेर । त्यसैको परिणाममा त्यहाँ पुगिएको हो । भलै त्यतिबेला त्यहाँ प्रचण्डजीले सुरुमै स्वीकार्नुभएन । पछि राजाले सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिएपछि प्रचण्डजीहरु पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आउनुभयो । त्यसैले एउटा दस्तावेज मात्रै तपाईले अध्ययन गरेर कोट गरेर सही निष्कर्षमा पुगिँदैन ।
तर मोहन वैद्य र सिपी गजुरेलहरुलाई समातेर चुनवाङ बैठकको वातावरण बनाइदिएको त भारतले भन्छन् नि ?
विलकुल गलत हो । यस्तो षड्यन्त्रको सिद्धान्तमा म विलकुलै विश्वास गर्दिनँ । नेपालको परिवर्तन सबै विदेशीले ल्याइदिए भन्ने एउटा नेपालको दरबारिया शक्तिहरुले जुन प्रचारप्रसार गर्दछन् र नेपालको सञ्चार क्षेत्रमा पनि पुराना दरबारियाहरुको धङधङी म यदाकता देख्छु । तिनीहरुले यस्ता कुरा ल्याउँछन्, जुन सत्य होइन । नेपालीहरुले ००७ सालदेखि जुन परिवर्तन ल्याएका छन्, आफ्नो बलमा ल्याएका छन् । बरु बाहिरका शक्तिहरुले परिवर्तन रोक्ने कोसिस गरेका छन् ।
अन्तिममा, सुरुमा सुशील कोइरालालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कुरा आफैंले गर्नुभयो रे पछि दुईचारदिन पछि तपाई पछि फर्कनुभयो भन्ने हल्ला बाहिर आयो, त्यो के भाको हो ?
होइन यो सत्य कुरा हुँदै होइन । म आफैं निर्वाचित प्रधानमन्त्री थिएँ । जेठ १५ गते स्वतः संविधानसभाको अवसान हुन पुग्यो, त्यो अवस्थामा निर्वाचन गराउने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा भनेकै निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले गराउने हो । त्यसलाई जबर्जस्ती घेराबन्दी गरेर मलाई छोडाउन बाध्य पारिएपछि लोकतन्त्र, गणतन्त्रप्रतिको मेरो प्रतिबद्धताको कारणले खिलबहादुर रेग्मीलाई शपथ ग्रहण गराएर हस्तान्तरण गरेको छु । नेपाली इतिहासमा यस्तो पहिलोचोटि एउटा प्रधानमन्त्रीले राजिनामा नै नगरीकन अर्को सरकार प्रमुखले सरकार परिवर्तन गरे ।
त्यो बेलामा तपाईंलाई बाध्य पारिए भन्नुभयो, बाध्य चाहिँ यहीँका पार्टीहरुले मात्रै पारेका हुन् कि बाहिरका शक्तिहरुले पनि ?
होइन, बाहिरका कुरा होइन । मेरो नेतृत्वमा भएको चुनावमा उनीहरुले स्वतः भाग लिनु पर्दथ्यो । अर्को कुनै संवैधानिक बाटो नै थिएन । राजनीतिक दलहरुले त्यसमा नमानेपछि र राष्ट्रपतिलाई पनि विभिन्न ढंगले प्रभावित पार्ने प्रयत्न भइसकेपछि मलाई लाग्यो, अब मैले छिटो निर्वाचन गराउनुपर्छ । त्यसको लागि वहालवाला प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा चुनाव बढी सजिलो हुन्छ भनेर मैले नै हस्तान्तरण गरेको । मैले कहीँ राजिनामा दिएको थिइनँ । खोज्नुहोला तपाईंले । प्रधानमन्त्रीले राजिनामा नदिईकन अर्को चुनावी सरकार कसरी गठन भयो ? म त आफ्नै जोडबलमा नेपालमा संघीय गणतन्त्र ल्याउन भूमिका खेलेको मान्छे, यसलाई बचाउन म चाहन्थेँ । त्यसको रक्षाको लागि मैले आफ्नो पदलाई बलिदानी दिएर मैले यो प्रक्रियालाई जारी राखेँ ।( बीबीसी नेपाली सेवामा ‘लोकतन्त्रको एक दशक’का लागि सुरेन्द्र केसीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)
#Main News #Samaj